The Rise - Converted Church Apartment, kufuphi beach
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJanice
IRise yindlu yokulala epholileyo kwaye enesitayile efumaneka entliziyweni yeDolophu eNdala yaseScarborough. Kutshanje iguqulwe isuka kwicawa yangaphambili yePentekoste eyakhiwe ngeminyaka yoo-1800, iThe Rise inendawo ekhululekileyo nenesitayile sangaphakathi.
Iimvume zokupaka iiyure ezingama-24 zinikezelwa simahla kwindawo yokupaka esitratweni kufutshane. Ungapaka ngasemva kwipropathi eSt Sepulcher Street nakwindawo yokupaka ejikelezileyo.
Indawo yokungena ikhokelela kwigumbi lokuphumla eliqaqambileyo nelinomoya elijonge e-Eastborough enesofa yezihlalo ezi-2 ezitofo-tofo kunye nezitulo ezi-2, ibhodi esecaleni, i-socket ye-USB kunye ne-TV. Kukwakho netafile yokutyela yezihlalo ezi-4 kunye nezitulo.
Kukho amagumbi amabini okulala, elinye linegumbi eliphindwe kabini kwaye elinye lineebhedi ezinkulu.
Kukho ibhedi yohambo kunye nesitulo esiphezulu esifumanekayo kwiintsana ukuba kuyafuneka, nangona kungekho bhedi ikhoyo. Nceda uqaphele ukuba akukho ndawo yokufaka ibhedi kumagumbi okulala. Nceda ubuze ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga ngendawo yokuhlala yabantwana.
Igumbi lokuhlambela langoku linebhafu eneshawa. Zikhona iitawuli zezandla nezokuhlambela.
Kukwabonelelwe ngezibonelelo zeti/kofu kunye nezinye ezongezelelekileyo zokukunceda ukuba uhlale kubusuku bakho bokuqala.
4.94 · Izimvo eziyi-150
Ukuhamba nje imizuzu embalwa ukuya elunxwemeni, izibuko kunye nenqaba kunye nokuhamba nje okufutshane ukuya kwindawo exakekileyo yedolophu yaseScarborough, indawo esembindini yeRise iyenza ibe yindawo efanelekileyo yokuhlola idolophu kunye nonxweme oluzukileyo lwaseYorkshire.